Xasan Sheekh oo ka hadlay Weerarkii Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Isaga oo sii hadlayay ayuu sheegay in Al-Shabaab maalin walba ay daadiyaan dhiiga Shacabka Soomaaliyeed,balse taasi aan lagala galeyn wadahadal,hayeeshee uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Beesha Caalamka ay diyaar u yihiin wadahadal.
“Runtii dalkan Soomaali ayaa leh malaha dad kale,mala aqbalaayo in dadkeena maalin walba la iska dilo,Al-Shabaab iyo Daacish waxaana leenahay dadkiina soomaaliyeed dhinac kasoo raaca ee wadahadal qaata,laakin wadahadal idinkama galeyno inad dadkeena leysaan ayuu yiri Xasan Sheekh.
Dhalinyarada weli ka barbar dagaalamaya Al-Shabaab ayuu ugu baaqay inay kasoo baxaan,isla markaana ay dowladda Federaalka Soomaaliya ksoo biiraan.
MD Axmed Madoobe oo si lama filaan uga hadlay Weerarkii Al Shabaab